Home Archives - Puntland Mirror Believable Media Website
June 20, 2016 Abdi Omar Bile 0
Maleeshiyada al-Shabaab ayaa shan askari oo booliis ah ku dishay gobolka xuduuda ee ku yaala Waqooyiga-bari ee dalka Kiinya maanta oo Khamiis ah, sida uu sheegay guddoomiye gobol. Ma jirto bayaan deg deg ah oo […]
June 18, 2016 Puntland Mirror 0
Baydhabo-(Puntland Mirror) Guddoomiyaha baarlamaanka dowlada federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jawaari ayaa maanta oo Sabti ah booqday magaalada Baydhabo ee caasimada maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, sida ay warbaahinta u sheegeen saraakiisha maamuulkaas. Magaalada […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Maxkamada ciidamada militariga dowlada Puntland ayaa dil toogasho ah ku xukuntay maalintii Khamiista 43 dagaalyahan oo al-Shabab ah, sida ilo-wareedyo dhanka ciidanka ah ay u sheegeen Puntland Mirror. 43 dagaalka yahan oo al-Shababka […]
Xiritaanka xerada qaxootiga Dhadhaab sanadkan aad bay khatar u tahay, Raysulwasaaraha Soomaaliya ayaa sidaa yiri, isagoo soo jeediyay in la rumaysan karo in 2019-ka laga dhigo wakhtiga isku dayida xiritaanka. “Waxaanu rabnaa in qaxootigayaga uu […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Guddoomiyihii hore ee gobolka Bari Cabdisamad Maxamed Gallan ayaa ku eedeeyay waxqabad xumo intii ay jirtay xukuumada Cabdiweli Maxamed Cali oo hadda talada haysa, wareysi uu siiyay Raadiyo Daljir. Gallan oo wareysi gaar […]
Haayada cunada aduunka u qaabilsan Qaramada Midoobay (WFP) ayaa shalay oo Arbaco ahayd sheegtay in ay baarayso eedaymaha sheegaya in ay isku dayday in raashin dhacay oo waxyeeloobay u geyso dadka dega gobolka Gedo ee […]
Raysulwasaare ku-xigeenka Soomaaliya oo kulan kula yeeshay Nayroobi safiirka Maraykanka u qaabilsan Soomaaliya
Nayroobi-(Puntland Mirror) Raysulwasaare ku-xigeenka dowlada federaalka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte (Qaalib) ayaa magaalada Nayroobi ee caasimada dalka Kiinya kula kulmay maanta oo Arbaco ah safiirka Maraykanka u qaabilsan Soomaaliya, Donland Y. Yamamoto, sida ay ku […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Doorashada hordhaca ah ee dowladdaha hoose ee Puntland ayaa maanta oo Isniin ah ka bilaabmay saddexda degmo ee Qardho, Eyl iyo Ufeyn. Doorashada oo ah tii ugu horeysay abid ee hal qof iyo [...]